"रेखा थापा फाउन्डेसनको खुलासा" – Nepal Reports
नायिका रेखा थापाको रेखा थापा फाउन्डेसन किन र के उद्देश्यले खोलिएको थियो? वर्तमान समयमा सो फाउन्डेसनले समाज र देशको लागि के चाहि गर्दै छ त??
नायिका रेखा थापाको रेखा थापा फाउन्डेसन किन र के उद्देश्यले खोलिएको थियो? वर्तमान समयमा सो फाउन्डेसनले समाज र देशको लागि के चाहि गर्दै छ त?? "समाजसेवा अरु को पैसा मागेर होइन आफैं गर्नुपर्छ" भन्ने उहाँले, आफ्नो फाउन्डेसन मार्फत चाँहि के गर्नु भयो त??
रेखा थापा फाउन्डेसनका मेनेजर तथा सक्रिय सदस्य समेत रहनु भएका पुस्कर भट्ट यसो बताउनु हुन्छ।
नायिका रेखा थापा ले पनि रेखा थापा फाउन्डेसन र राउटेहरु को सबाल मा नेपाली समाज लाई सार्बजनिकरुप मै जबाफ दिन जरुरी छ। किनकि हिजो रेखा थापाले सस्तो चर्चा र परिचर्चा को लागि समाजसेविहरुको बिरुद्दमा जुन रिसको आगो ओकाल्दै "समाजसेवा अरु को पैसा मागेर होइन आफैं गर्नुपर्छ " भन्नु भयो ।
मलाई अचम्म लग्यो, २०७१ सालमा म लगायत अरु साथीहरुको संलग्नतामा ताम-झामका साथ रेखा थापा फाउन्डेसन को काठमाडौँ को प्रसिद्ध होटेल मा उद्धघाटन गरेर लोपुन्मुख जातीका राउटे समुदायको लागि करिब २०० वटा घर सुर्खेतमा तथा राउटेहरुको बच्चाहरुलाई उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने भन्दै ३ केटाकेटि "नेपाल राउटे बिकाश संघ" जोगबुडा, डढेलधुराका केन्द्रीय अधेछ्य श्री दान सिंह राउटेको सहयोगमा म पुस्कर भट्ट स्वयमले नै स्थानिय पुलिस तथा समुदाय संग लिखित जमानी बसेर काठमाडौ ल्याएको कुरा अवगत नै छ। त्यसपश्चात, स्वयम्भुको आनन्दकुटी बिद्धापिठमा भर्ना गरिएको थियो र करिब ३ लाख स्कुलमा तिरेको थियो। अहिले ति बच्चा कहाँ छन् र किन छन् ? ??
प्रश्न यहाँ खडा हुन्छ ।
अनि हिम्मतवाली फिल्म प्रमोसनको लागि नजानिदो तरिकाले ४ जना राउटेहरुलाई फाउन्डेसन मार्फत काठमाडौँ ल्याएर फिल्म हल -हल चहारेर फिल्म प्रमोसनको लागि सोझा राउटेहरूलाइ प्रयोग गरेर जुन चर्चा बटुल्न सफल त तपाइँ हुनु नै भयो तर त्यसको भोलि पल्टै ति राउटेहरु कहाँ गए, कता गए र कसरी गए?
कुनै समबेदना र भाबना तपाइँ संग छ ? आज को मिति सम्म जान्न पनि चाहनु भएको छ रेखा जी ?
हो मेरो प्रश्न छ कि , यो सबै गर्ने पैसा तपाईलाई कहाँबाट आएको थियो ? तपाईले छातीमा हात राखेर जबाफ दिनु पर्छ। करिब २-३ करोड पैसा तपाई को आफ्नै थियो कि क्यानाडा को कुनै फाउन्डेसन ले सहयोग गरेको थियो। के त्यो बेला तपाईले चन्दा माग्दा जायज हुने ? अहिले समाजमा केहि राम्रो गरेका समाजसेवीहरुले माग्दा तपाइँलाई सहन नहुने ?
आफ्नो पेशा,परिवार र ज्यानलाई सहित दाऊमा राखेर, समाज सुधार तथा बिपन्न वर्गहरुका लागि सामाजिक भाबना राखेर समाजमा नमुना बन्दै एक अर्कामा पारस्परिक सहयोगको भाबना राखेर असल समाज निर्माणमा लागेका सम्माननिय धुर्मुस सुन्तली, रबि लामिछाने, ज्ञानेन्द्र शाही तथा हाम्री समाजसेवी नाईका स्वेता खड्काज्यु को काम माथि तपाईले प्रश्न गर्नु भन्दा पहिले तपाई रेखा थापाज्युले आफ्नो रेखा थापा फाउनडेसनलेके गर्यो भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ। यदि होइन भने तपाई जसो मुखले समाजमा प्रेरणा बन्छु भन्ने कलाकारबाट समाज दिगभर्रमित पार्ने र सम्पूर्ण समाजसेवीहरुलाइ निरुत्साहित पार्ने गरि बोल्न छुट पाउनु हुने छैन। तपाई रेखा थापा लगाएत नेता भनिने राम कुमारी झाक्रीलाई पनि समाजसेवीहरुलाइ सहयोग गर्न सक्नु हुन्न भने पनि निरुसाहित पार्ने खालका अन्तरबार्ताहरु दिएर छोटो चर्चामा नआउनु हुन अनुरोध गर्दछु। रेखा थापा फाउन्डेसन को केही गतिविधि का तस्बिरहरू;
थापा र झाक्री ज्यु उहॉहरु ? हाम्रा सामाजिक नायकहरु ले गरेको जति १५% मात्र तपाइँहरुले भाषणमा बाहेक समाजमा गरेर देखाउनु अनि मात्र अरु को राम्रो काम को बिरोध गरेको सुहाउँछ।
रेखा थापा फाउन्डेसनको मेनेजर तथा सक्रिय सदस्यको नाताले मैले राखेको प्रश्नको उत्तर रेखा थापा बाट सार्बजनिक रुपमा पाउने आशामा छु। धेरै पत्रपत्रिकाहरुले फाउन्डेसन उद्घाटन गर्दा मुख्य समाचार बनाउनु भएको थियो तर फाउन्डेसन ले के गर्यो, के गर्दै छ ? फलो अप समाचार बनाउन पर्दैन थियो ? यो प्रस्न मेरो सम्पूर्ण मिडियाका साथिहरु लाई पनि छ l